कम्प्रेस फोटोहरू - बहु jpg अनलाइन / अफलाइन कम्प्रेस गर्नुहोस्
फोटोहरू संकुचन गर्नुहोस्
उन्नत छवि कम्प्रेसर
उन्नत jpg छवि कम्प्रेसर प्रयोग गरी छवि आकार र छवि गुणवत्ता अफलाइन र अनलाइन अनुकूलन गर्नुहोस्।
*तपाईं कम्प्रेस गर्न १० छविहरू थप्न सक्नुहुन्छ।
छविहरू कम्प्रेस कसरी गर्ने?
क्लिक गर्नुहोस् फाईल थप गर्नुहोस् फाइलहरू थप्न। तपाईं असीमित फाईलहरू थप्न सक्नुहुन्छ।
कम्प्रेशन एल्गोरिथ्म सुरू गर्न अपलोड गरिएको छविको आकार कम गर्न सुरू कम्प्रेस क्लिक गर्नुहोस्। रोक्न क्लिक गर्नुहोस् रद्द गर्नुहोस्।
क्लिक गर्नुहोस् डाउनलोड तपाईको संकुचित jpeg / संकुचित png वा संकुचित छवि वा फोटो डाउनलोड गर्न।
तपाईं कम्प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ JPG, GIF, PNG उत्तम गुणको साथ। JPG, GIF, र PNG को आकार एक ठाउँमा कम गर्नुहोस्।
छवि कम्प्रेसनले कसरी काम गर्दछ?
तपाईंको स्मार्टफोन फोटोहरूले धेरै अधिक भण्डारण ठाउँ लिन्छ। यहाँ छ कि हामी कसरी तिनीहरुलाई आकार दिन सक्छौं।
यस अनुप्रयोगले छविहरूको आकार कम गर्दछ प्रत्येक पिक्सेलको विश्लेषण गरेर। हाम्रो परीक्षणको साथ, मानक तस्वीरहरूबाट फाइल आकार घटाउने २०% र% 85% बीचमा रह्यो। छवि कम्प्रेसर एक कम्प्रेसर गर्न को लागी एक कार्यक्रम हो र डिजिटल फोटोहरु का आकार बदलने के साथ ही आफ्नो वास्तविक तस्वीर को गुणवत्ता को रक्षा गर्न आफ्नो डिजिटल फोटोग्राफ को विशेष ख्याल राख्नु। हाम्रा कम्प्रेसरहरूले विशेष रूपले सिर्जना गरिएको उन्नत फोटो हानिकारक निचोड इञ्जिनहरू र प्रविधि समावेश गर्दछ।
यहाँ उदाहरणको रूपमा यो अनुप्रयोगले तपाइँलाई छविहरूको आकार घटाउन अनुमति दिनेछ।
यो केवल उदाहरण छवि हो तपाईंको छविहरू कति अनुकूलित हुन्छन्।
फोटो कम्प्रेस अफलाइन पहिलो वेब अनुप्रयोग हो।
तस्विरहरू अनलाइन र अफलाइन एक हल्का र शक्तिशाली छवि कम्प्रेसन अनुप्रयोग हो। एप्लिकेसनले तपाईंलाई चित्रको सानो आकारको फोटोमा कम्प्रेस गर्न अनुमति दिनेछ क्वालिटीको नोक्सानी वा हानिकारक कम्प्रेसनको साथ। तपाईं आफ्नो उपकरणमा अनुप्रयोग स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ र अफलाईन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो विन्डोज / एन्ड्रोइड / एप्पल / लिनक्स उपकरणहरूमा यो अनुप्रयोग स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। यो अनुप्रयोग नि: शुल्क अनुप्रयोग हो जुन तपाईलाई कुनै पनि प्रकारको शुल्क तिर्नु पर्दैन। हाम्रो छवि संग आफ्नो छवि कम्प्रेस गर्न यो सरल तस्विरहरु लाई सुनिश्चित गर्न को लागी छविको लाईटवेट, छिटो लोडि and र उत्पादन तयार छ। पावरपोइन्ट प्रस्तुतीकरणमा सबै तस्विरहरू कसरी कम्प्रेस गर्ने। हाम्रो छवि प्रसंस्करण अनुप्रयोगले तपाईंलाई jpg फाईल कम्प्रेसर अनलाइन निःशुल्क रूपान्तरण गर्न वा छविहरूको आकार परिवर्तन गर्न वा jpg आकार घटाउन मद्दत गर्दछ।
एक मिलियन भन्दा बढी डाउनलोडहरू, कम्प्रेसन अनुप्रयोग एक सबैभन्दा लोकप्रिय छवि अप्टिमाइजेसन सफ्टवेयर हो जुन इन्टरनेटमा वा इन्टरनेटमा उपलब्ध छ। हामी लाखौं फोटो फोटोग्राफरहरू, ब्लगरहरू, वेबमास्टरहरू, व्यवसायहरू, वा आकस्मिक प्रयोगकर्ताहरूलाई भण्डारण गर्न, पठाउँदै, र डिजिटल तस्वीरहरू साझेदारीमा मद्दत गर्दैछौं। अनुप्रयोग डिकोड र पुन: ईन्कोड छविहरू अधिक कुशलताका साथ, यसले छवि फाइलहरू अनुकूलन गर्न अनुमति दिईन्छ बिना कुनै परिवर्तन वा रिजोलुसनको गुणस्तरमा। हामी तस्विर आकार घटाउन AI लाई प्रयोग गर्न कोशिस गर्दैछौं, HBO को सिलिकॉन भ्यालीमा जस्तै। यस अनुप्रयोगले तपाईंको छविहरू ढिलो ईन्टरनेट जडानहरूमा द्रुत लोड गर्न योग्य बनाउँदछ।